Ibhedi kunye nesidlo sakusasa seGran Sasso
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguEugenia
Amagumbi ethu apholileyo abekwe kwilali eneempawu, enamagumbi amabini okulala, kunye nokongezwa ngesicelo sebhedi enye, exhotyiswe ngezibonelelo, ikhitshi, igumbi lokuhlala, indawo yomlilo.
Ithuba lokuhlala kwindawo enobulungisa ngaphakathi kweGran Sasso National Park kunye neMonti della Laga. Kwilali encinci, ezolileyo ehlala kwindawo eluhlaza kwaye ilele kumathambeka amakhulu eGran Sasso.
Indawo emangalisayo, ejikelezwe yindalo kunye nembali. Ukukwazi ukwenza imidlalo emininzi, ukususela ebusika ukuya ehlobo. Ipropathi ikwiikhilomitha nje ezimbalwa ukusuka kwiindawo zokuchithela i-ski zasePrato Selva nasePrati di Tivo. Le yokugqibela, ngexesha lasehlotyeni, inika ipaki yebhayisekile egqwesileyo eneendlela ezahlukeneyo, ukukhwela ihashe, iindlela ezihamba phambili zokuhamba kunye neendawo zokutyela ezinkulu. Ukongeza, ilizwe linika ithuba lokuya kwindawo echulumancisayo njengendawo yokuzivocavoca yamatye yendalo, enamawa anemikhono emifutshane ajonge phambili ekunyukeni ukusuka kweyona nto inesibindi.
Abanini be-B & B banobuhlobo, banomoya wokubuk' iindwendwe, ngokufumaneka ngokupheleleyo kwiindwendwe zabo. Banikezela ngenkampani yabo, isikhokelo sabo kwimbali, ubuhle bobugcisa kunye nendalo yale ndawo, kwaye xa ubekiwe ungangcamla ukutya kwabo kunye nezitya zalapha ekhaya kunye neemveliso eziqhelekileyo enkosi kwi-RESTAURANT YABO YASEKHAYA.
Abanini be-B & B banobuhlobo, banomoya wokubuk' iindwendwe, ngokufumaneka ngokupheleleyo kwiindwendwe zabo. Banikezela ngenkampani yabo, isikhokelo sabo kwimbali, ubuhle bobugcisa…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Fano Adriano